विभाजित प्रमाणीकरण - साक्षात्कार प्रश्न र जवाफ - यसको टेक स्कूल
विभाजित प्रमाण - साक्षात्कार प्रश्न र उत्तर
विभाजन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमले स्पिकङ्क सफ्टवेयर प्रयोग गरी मेसिन-डेट गरिएको डाटा विच्छेद गर्न अपेक्षित उपयुक्त व्यक्तिहरू प्रदान गर्नेछ। Splunk Analytics ले तपाईंलाई डेटा को धेरै मात्रा को पार्स गर्न मौका दिनेछ। यो विभाजित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमले अनिवार्य अन्वेषण, साझेदारी र परिणाम परिणामहरू, लेबलहरू र घटना प्रकारहरू, रिपोर्टहरू उत्पादन गर्न र चार्ट निर्माणमा प्रशिक्षण समावेश गर्दछ। यसले तपाईंलाई स्प्लिक ईन्जिनियरिङ, स्पिलक सिईएसलॉग, syslog सर्भर, लग परीक्षा, अलार्म, अन्वेषण, र डेशबोर्डहरू इशारा गर्न मद्दत गर्नेछ र तपाईंलाई एक प्रभावकारी विभाजन विकासकर्ता बनाउनेछ।
विभाजन कार्यान्वयनले तपाईंको व्यवसाय परिवर्तन गर्नेछ र यसलाई निम्न स्तरमा लिनेछ। जस्तो कि यो हुन सक्छ, प्रश्न हो: के तपाईं Splunker हुन को लागि क्षमता र क्षमता बलियो छ? त्यसो भए उनीहरु आफुलाई अलिकति माया गर्दछन्। उनीहरु आफुले आफुलाई माया गर्दछन्। तपाईं यस ब्लगमा भन्नुभएको सबैभन्दा व्यापक रूपमा मान्यता प्राप्त स्पिकर साक्षात्कार प्रश्नहरूको अनुभव गरेर सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
10 साक्षात्कार प्रश्न र विभाजन प्रमाणनका लागि जवाफ
विभाजित के छ? किन विभाजित मेशिन डाटा विच्छेद गर्न प्रयोग गरिन्छ?
Splunk / splunk engineering को भागहरू के हुन्?
लाइसेन्स मास्टरको स्पिलङ्कको प्रयोग के हो?
Splunk DB जोडिएको छ?
विभाजित परिप्रेक्ष्यबाट 'लाइसेन्स उल्लङ्घन' स्पष्ट गर्नुहोस्।
विभाजनमा के आउटलाइन सूची के हो?
तथ्याङ्क र घटनाक्रममा विविध विविधता के हो?
विभाजित बेसिनहरू के हुन्? जीवनव्यापी गर्न स्पष्ट गर्नुहोस्।
अलर्ट प्रबन्धकको क्षमता स्पष्ट गर्नुहोस्?
खोज टाउको लुकाउने र टाउको टाउकोको खोजी बीच भेद स्पष्ट गर्नुहोस्?
विभाजन Google तपाईंको मेशिन डाटाको लागि हो। यो एक सफ्टवेयर / मोटो तपाईंको इन्टरप्राइज डाटा इत्यादि, हेर्दै, घोषणा, र अवलोकनको लागि प्रयोग गरिएको छ। विभाजनले लाभदायक मेशिन डेटा लिन्छ र यसलाई चार्ट, सावधान, रिपोर्ट र यति मार्फत तपाईंको डेटामा वास्तविक समय बुझ्न सक्षम गरेर सक्षम परिचालन ज्ञानमा परिवर्तन गर्दछ।
विभाजन मेशिन डेटा तोड्नको लागि प्रयोग गरिन्छ किनभने यसले अनुप्रयोग प्रशासन, आईटी अपरेसन, सुरक्षा, स्थिरता, दुर्व्यवहार पहिचान, जोखिम बुझाइयोग्यता र त्यसका लागि अनुभव दिन सक्दछ।
हेड हेर्नुहोस् - GUI लाई खोज्न दिईयो
Indexer - फाईल मेशिन डाटा र डेटा।
फर्वार्डर - अनुक्रमणिकामा लागी लगहरू
परिनियोजन सर्भर - फैलिएको अवस्थामा विभाजन खण्ड व्यवस्थित गर्दछ।
इजाजतपत्र इस इन बिल्कङ्क ग्यारेन्टीको प्रभारमा छ कि डाटाको आदर्श उपाय दायर गरिन्छ। विभाजित इजाजतपत्र डेटा भोल्युममा निर्भर गर्दछ जुन एक 24hr सञ्झ्याल भित्र र यस रेखाहरू सँगै स्टेसनमा जान्छ, यो विश्वमा प्राप्त भोल्युमको सीमा भित्र रहेको निश्चित हुन्छ।
यो एक सामान्य SQL डाटाबेस मोड्युल हो जसले तपाईंलाई सहज रूपमा विभाजित प्रश्नहरू र रिपोर्टहरूसँग डाटाबेस डेटा समावेश गर्न अनुमति दिन्छ। यसले Splunk Enterprise र सम्बन्धित डेटाबेसहरू बीच भरोसेमंद, अनुकूलन र वास्तविक समय एकीकरण प्रदान गर्दछ।
घटनामा तपाईंले डेटा सीमालाई बढाउनुभयो भने, तपाइँ एक 'इजाजतपत्र उल्लङ्घन' गल्ती देखाइनेछ। सावित हुनु भनेको इजाजतपत्र 14 दिनको लागि सहन हुनेछ। एक व्यापार वा व्यापार इजाजतपत्रमा तपाईं5सूचनाहरू भित्र 30 सूचनाहरू हुन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको अनुक्रमणिका सूची वस्तुहरू र रिपोर्टहरू सक्रिय गर्न छोड्नु अघि। निशुल्क फारममा, यो केवल3सावधान सावधानी संकेत गर्नेछ।
सारांश सूची पूर्वनिर्धारित आउटलाइन फाईल हो (फाइल जो डुबेर इन्टरप्राइजले तपाईलाई अर्को देखाउने मौकामा प्रयोग गर्दछ)। बन्द गर्ने मौकामा तपाइँ धेरै प्रकारका समक्रमण सूची सूचीहरू चलाउन छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईले थप अन्डराउन फाइलहरू गर्न आवश्यक पर्दछ।
तथ्याङ्क बुँदाले तपाईंको दायर गरिएको पङ्क्तिमा प्रत्येक र प्रत्येक हालको फिल्डको उल्टाउन अंतर्दृष्टि बनाउँछ र तिनीहरूलाई नयाँ क्षेत्रहरूमा गुणहरू टाढा दिन्छ। कार्यक्रम स्ट्याट तथ्यांक चार्ज जस्तै छ, त्यस संग्रहबाट नतिजा प्रत्येक घटनामा इनलाइन थपिएको छ र यदि यो घटनासँग सम्बन्धित हुन्छ भने। कार्यक्रमस्ट्याट्सले आँकडा जस्तै मापनको लागि अनुरोध गरेको दर्ता गर्दछ, तथापि तिनीहरूलाई पहिलो कच्चे डाटामा जम्मा गर्छ।
एउटा सूची जो रेकर्ड गरिएको डेटा समावेश गरिएको छ, स्पिल कन्टेनरको रूपमा चिनिन्छ। यसले थप समयमा विशेष अवधिको घटना समावेश गर्दछ। जला जीवन चक्रले चरणहरू पछि लिनु समावेश गर्दछ:
Hot - यसमा विलम्बित सूचीबद्ध डाटा समावेश छ र कम्पोजिङको लागी खुला छ। प्रत्येक सूचीको लागि, कम से कम एक हट ह्यान्डिनहरू उपलब्ध छन्
न्यानो - तातो चरणमा डाटा हटाइयो
कोल्ड - चिसो चरण डेटालाई हटाइयो
जमे भएका - डेटा ठुलो देखि सारियो। अनुक्रमणिकाले ठोस डाटालाई बिस्तृत रूपमा मेटाउँछ तर ग्राहकहरूले यसलाई फाइल गर्न सक्दछ।
Thawed - फाइल फाइलबाट पुनःस्थापना गरिएको। बन्द मौकामा तपाईंले ठोस डेटा दस्तावेजमा, तपाइँ पछि यसलाई यसलाई फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ (डिफ्रिस्टिङ) द्वारा।
तैयार पर्यवेक्षकले ढिलाइ को धेरै भन्दा अधिक छानबीन देखाउँछ, उदाहरणका लागि, तयार घटनाहरू सावधानी दिन्छन्। यसले सक्रिय सक्रिय सावधानीबाट अनुक्रमित सूची हेर्न जडान गर्दछ। त्यसै गरी, तयार नाम, अनुप्रयोग, क्रम (बुक गरिएको, वास्तविक समय, वा सञ्झ्यालमा हिँड्ने), गम्भीरता र मोड देखाउँछ।
टाउको पूलिंग जडान गरिएको सर्भरको एक सभा हो जुन लोड, कन्फिगरेसन र ग्राहक डाटा साझा गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ जसमा हेड ग्रुपिंग फिचर इन्टरनेटको एक टुक्रा खोज्न को लागी एक फोकल सम्पत्ति को रूपमा भरिएको हुन्छ। चूंकि पूछताछ हेड समूह bolsters भाग संगतता, समान ड्यासबोर्ड र पछि चलाउन सकिन्छ र गुच्छा देखि कुनै पनि व्यक्ति देखि देख्यो।
साक्षात्कार प्रश्नहरू - साइबर-सुरक्षा व्यवसायका लागि जवाफ
50 सबै भन्दा साधारण साक्षात्कार प्रश्नहरू तपाईं साक्षात्कारमा सामना गर्न सक्नुहुन्छ